1 Ndị Eze 18 | Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl | Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ (2007)
18 O wee ruo mgbe ọtụtụ ụbọchị gasịrị+ na okwu Jehova ruru Ịlaịja ntị n’afọ nke atọ, sị: “Gaa gosi Ehab onwe gị, n’ihi na ekpebisiwo m ike ime ka mmiri zoo n’elu ala.”+ 2 Ya mere, Ịlaịja gara igosi Ehab onwe ya mgbe ụnwụ ahụ siri ike+ na Sameria. 3 Ka nke a na-eme, Ehab kpọrọ Obedaya, bụ́ onye na-elekọta ezinụlọ ya.+ (Obedaya bụ onye na-atụ egwu Jehova nke ukwuu.+ 4 Ọ bụ ya mere na mgbe Jezibel+ bipụrụ ndị amụma Jehova,+ Obedaya kpọọrọ otu narị ndị amụma wee zoo ha mmadụ iri ise mmadụ iri ise n’ọgba, o wee na-enye ha ihe oriri na mmiri.)+ 5 Ehab wee gwa Obedaya, sị: “Gaa gburugburu ala a ruo n’isi iyi niile nakwa n’iyi ndagwurugwu niile. Ikekwe, anyị ga-ahụ ahịhịa ndụ,+ ka anyị wee chebe ịnyịnya na ịnyịnya ibu anyị ndụ, ka a gharakwa ịla ụmụ anụmanụ anyị n’iyi ọzọ.”+ 6 Ya mere, ha kere ala ahụ ha ga-esi na ya gafere n’etiti onwe ha. Ehab si otu ụzọ gawa naanị ya, Obedaya sikwa ụzọ ọzọ gawa naanị ya.+ 7 Ka Obedaya nọ na-aga n’ụzọ, lee, Ịlaịja bịara izute ya.+ Ọ matara onye ọ bụ ozugbo. O wee gbuo ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala+ wee sị: “Ọ̀ bụ gị bụ onye a, onyenwe m+ Ịlaịja?” 8 O wee sị ya: “Ọ bụ m. Gaa gwa onyenwe gị, sị,+ ‘Ịlaịja abịala.’” 9 Ma ọ sịrị: “Olee mmehie+ m mere nke mere ị ga-eji chọọ inyefe ohu gị n’aka Ehab ka o gbuo m? 10 Dị nnọọ ka Jehova bụ́ Chineke gị dị ndụ,+ ọ dịbeghị mba ma ọ bụ alaeze ebe onyenwe m na-ezigabeghị ozi ka a chọọ gị. Mgbe ha sịrị, ‘Ọ nọghị ebe a,’ ọ na-eme ka alaeze ahụ na mba ahụ ṅụọ iyi na ha ahụghị gị.+ 11 Ugbu a ị na-asị, ‘Gaa gwa onyenwe gị, sị: “Ịlaịja abịala.”’ 12 Ọ ga-erukwa na mgbe m si n’ebe ị nọ pụọ, mmụọ+ Jehova ga-ebuga gị n’ebe m na-agaghị ama; mgbe ahụ kwa, ya abụrụ na mụ agawo kọọrọ Ehab, ọ gaghịkwa ahụ gị, ọ ga-egbukwa+ m, n’ihi na ohu gị bụ onye na-atụ egwu Jehova malite na nwata.+ 13 Ọ̀ bụ na a gwabeghị onyenwe m ihe m mere mgbe Jezibel gburu ndị amụma Jehova, otú m si zoo ụfọdụ ndị amụma Jehova, otu narị ndị ikom, mmadụ iri ise mmadụ iri ise n’ọgba,+ ma na-enye ha ihe oriri na mmiri?+ 14 Ugbu a ị na-asị, ‘Gaa gwa onyenwe gị, sị: “Ịlaịja abịala.”’ Ọ ga-egbukwa m.”+ 15 Otú ọ dị, Ịlaịja sịrị: “Dị nnọọ ka Jehova nke ụsụụ ndị agha+ dị ndụ,+ bụ́ onye m guzo n’ihu ya, m ga-egosi ya onwe m taa.” 16 Ya mere, Obedaya gawara izute Ehab ma kọọrọ ya; Ehab wee gaa izute Ịlaịja. 17 O wee ruo na ngwa ngwa Ehab hụrụ Ịlaịja, Ehab sịrị ya ozugbo ahụ: “Ọ̀ bụ gị bụ onye a, onye na-ewetara Izrel nsogbu?”+ 18 O wee sị: “Ọ dịghị nsogbu m wetaara Izrel, kama ọ bụ gị na ụlọ nna gị wetaara Izrel nsogbu,+ n’ihi na unu ahapụwo ihe Jehova nyere n’iwu,+ unu wee soro Bel.+ 19 Ugbu a, zipụ ozi, kpọkọtara m Izrel dum n’Ugwu Kamel+ nakwa narị ndị amụma Bel+ anọ na iri ise nakwa narị mmadụ anọ bụ́ ndị amụma nke ogwe osisi dị nsọ,+ bụ́ ndị na-eri ihe na tebụl Jezibel.”+ 20 Ehab wee zipụ ozi n’etiti ụmụ Izrel niile wee kpọkọta ndị amụma+ ahụ n’Ugwu Kamel. 21 Ịlaịja wee bịakwute ìgwè mmadụ ahụ dum wee sị ha: “Ruo ole mgbe ka unu ga na-enwe echiche abụọ dị iche?+ Ọ bụrụ na ọ bụ Jehova bụ ezi Chineke, sowenụ ya;+ ma ọ bụrụ na ọ bụ Bel, sowenụ ya.” Ha azaghị ya ihe ọ bụla. 22 Ịlaịja wee sị ndị ahụ: “Ọ bụ m bụ onye amụma Jehova fọdụrụ,+ naanị m, ebe ndị amụma Bel dị narị ndị ikom anọ na iri ise. 23 Ka ha kpụnye anyị ụmụ oké ehi abụọ, ka ha onwe ha họrọkwa otu nwa oké ehi ma bọkasịa ya, dokwasịkwa ya n’elu nkụ, ma ha agaghị etinye ya ọkụ. Mụ onwe m kwa ga-akwadebe nwa oké ehi nke ọzọ, m ga-edokwasịkwa ya n’elu nkụ, ma agaghị m etinye ya ọkụ. 24 Unu ga-akpọkukwa aha chi unu,+ ma mụ onwe m ga-akpọku aha Jehova; ọ ga-erukwa na ezi Chi nke ji ọkụ za,+ ọ bụ ya bụ ezi Chineke.”+ Ha niile wee zaa, sị: “Nke ahụ dị mma.” 25 Ịlaịja wee sị ndị amụma Bel: “Họrọnụ n’onwe unu otu nwa oké ehi, burukwanụ ụzọ kwadebe ya, n’ihi na ọ bụ unu ka n’ọnụ ọgụgụ; kpọkuokwanụ aha chi unu, ma unu agaghị etinye ya ọkụ.” 26 Ya mere, ha weere nwa oké ehi ahụ o nyere ha. Ha wee kwadebe ya, ha nọkwa na-akpọku aha Bel malite n’ụtụtụ ruo n’ehihie, sị: “Bel, za anyị!” Ma a nụghị olu ọ bụla,+ ọ dịghịkwa onye na-azaghachi.+ Ha wee na-awụgharị gburugburu ebe ịchụàjà ahụ nke ha rụrụ. 27 O wee ruo n’ehihie na Ịlaịja malitere ịkwa ha emo,+ sị: “Kpọkusienụ ya ike, n’ihi na chi ka ọ bụ;+ n’ihi na ọ ghaghị ịbụ na o nwere ihe na-echegbu ya, nsị na-akpakwa ya,+ o wee gawa mposi.+ Ma ọ bụ, ọ pụrụ ịbụ na ọ na-arahụ ụra, kwesịkwa iteta!”+ 28 Ha wee malite ịkpọkusi ya ike, jirikwa daga na ube na-amakasị+ onwe ha dị ka omenala ha si dị, ruo mgbe ha mere ka ọbara na-agba ha n’ahụ́. 29 O wee ruo na ozugbo ehihie gafere, ha nọ na-eme dị ka ndị amụma+ ruo n’oge e ji achụ àjà ọka,* a nụghị olu ọ bụla, ọ dịghịkwa onye na-azaghachi, ọ dịghịkwa onye na-aṅa ntị.+ 30 N’ikpeazụ, Ịlaịja gwara ndị ahụ niile, sị: “Bịanụ.” Ya mere, ndị ahụ niile bịakwutere ya. O wee rụzie ebe ịchụàjà Jehova nke e tidara etida.+ 31 Ya mere, Ịlaịja buuru nkume iri na abụọ dị ka ole ebo ụmụ Jekọb dị, bụ́ onye okwu Jehova ruru ntị,+ sị: “Izrel ka aha gị ga-abụ.”+ 32 O wee jiri nkume ndị ahụ wuo ebe ịchụàjà+ n’aha Jehova,+ gwuokwa olulu, nke há ka ebe a ghara mkpụrụ juru ihe ọ̀tụ̀tụ̀ sia abụọ, gburugburu ebe ịchụàjà ahụ. 33 Mgbe o mesịrị nke ahụ, o doro nkụ+ n’usoro wee bọkasịa nwa oké ehi ahụ ma dokwasị ya n’elu nkụ ahụ. O wee sị: “Gbajuonụ nnukwu ite anọ mmiri ma wụọ ya n’elu àjà nsure ọkụ nakwa n’elu nkụ ahụ.” 34 O wee sị: “Meenụ ya ọzọ.” Ha wee mee ya ọzọ. Ma ọ sịrị: “Meekwanụ ya nke ugboro atọ.” Ha wee mee ya nke ugboro atọ. 35 Mmiri ahụ wee si otú a gazuo gburugburu ebe ịchụàjà ahụ, ọ gbajukwara olulu ahụ mmiri. 36 O wee ruo n’oge+ e ji achụ àjà ọka na Ịlaịja onye amụma bịarutere nso, sị: “Jehova bụ́ Chineke Ebreham,+ Aịzik+ na Izrel,+ ka a mara taa na ị bụ Chineke n’Izrel+ nakwa na m bụ ohu gị nakwa na ọ bụ dị ka okwu gị si dị+ ka m mere ihe ndị a niile. 37 Biko, za m, Jehova, biko, za m, ka ndị a wee mara na ọ bụ gị, Jehova,+ bụ ezi Chineke, na gị onwe gị emewokwa ka obi ha chigharịa.”+ 38 Ọkụ+ nke Jehova wee daa repịa àjà nsure ọkụ+ ahụ na nkụ ahụ na nkume ndị ahụ na ájá, ọ mịkọkwaara mmiri dị n’olulu ahụ.+ 39 Mgbe ndị ahụ niile hụrụ ya, ha gburu ikpere n’ala ozugbo, kpudo ihu n’ala,+ wee sị: “Ọ bụ Jehova bụ ezi Chineke! Ọ bụ Jehova bụ ezi Chineke!” 40 Ịlaịja wee sị ha: “Jidenụ ndị amụma Bel! Unu ekwela ka otu n’ime ha gbapụ!” Ha jichiri ha ozugbo, Ịlaịja wee kpụrute ha n’iyi ndagwurugwu Kaịshọn+ wee gbuo ha n’ebe ahụ.+ 41 Ịlaịja wee sị Ehab: “Lawa, rie ihe, ṅụọkwa ihe ọṅụṅụ;+ n’ihi na ụda nke mkpọtụ oké mmiri ozuzo na-ada.”+ 42 Ehab wee lawa ịga rie ihe nakwa ịṅụ ihe ọṅụṅụ. Ma Ịlaịja gbagooro n’elu ugwu Kamel wee hulata ala+ ma kpunye ihu ya n’agbata ikpere ya abụọ.+ 43 O wee sị onye na-ejere ya ozi: “Biko, gbagoo. Lee anya ná mpaghara oké osimiri.” Ya mere, ọ gbagooro lee anya wee sị: “Ọ dịghị ihe m hụrụ ma ọlị.” O wee sị, “Gbagoo ọzọ,” ruo ugboro asaa.+ 44 O wee ruo na nke ugboro asaa na ọ sịrị: “Lee! E nwere obere ígwé ojii dị ka ọbụ aka mmadụ nke si n’oké osimiri na-apụta.”+ O wee sị: “Gaa sị Ehab, ‘Kwadebe ụgbọ ịnyịnya gị!+ Gbadawakwa ka oké mmiri ozuzo ghara igbochi gị ịla!’” 45 O wee ruo na mgbe nke a na-eme, ígwé ojii na ifufe+ mere ka eluigwe gbachie, nnukwu mmiri wee malite izo.+ Ehab nọkwa na-agba ụgbọ ịnyịnya wee ruo Jezril.+ 46 Aka Jehova dịkwasịrị Ịlaịja,+ o wee kee ájị̀ n’úkwù,+ buru Ehab ụzọ gbaruo Jezril.+